I-Gemini kunye ne-Aquarius-Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Gemini
Gemini kunye ne-Aquarius
Ukuhambelana kwe-Gemini kunye no-Aquarius ngoThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Gemini kunye ne-AquariusUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
UGemini kunye no-Aquarius banokulala ngesondo ngokuvuselela ngamazwi. Akudingeki ukuba bahambe ze ukuze babe namava ngokwesondo, nangona baya kufuna ukuhamba ze ngalo lonke ixesha ukuze bazikhulule kuzo zonke izithintelo zabantu ezimele ngeengubo. Baya kulahleka endleleni eya kwindawo ethile kwaye babe neentlobano zesini apho. Okanye kwenye indawo. Kodwa ngubani okhathalayo xa befuna imimoya yosapho kwaye bafuna ukuba nexesha elimnandi ngelixa bekulo.
Bobabini baya kuvuswa licala lobukrelekrele bobudlelwane babo kwaye ukuba bayakwaneliseka, kufuneka bathathele ingqalelo omnye komnye. Akukho uGemini okanye u-Aquarius uya kuze abe nobudlelwane obunzulu nomntu, ngokombono wabo, osisidenge. Kwanento abaza kuyibiza ngokuba yinto engabalulekanga ngokwesini kufuneka ibe nomntu onobulumko obaneleyo kunye nento yokuthetha.
Banokwabelana ngesondo naphi na kwaye akukho namnye kubo oya kubakhathalela. I-Gemini ingumntwana kwaye inokuba neentloni kwiimeko ezithile, kodwa xa u-Aquarius ethatha, uGemini uya kuqonda ukuba akukho mda kwinkululeko yabo yokuthetha. La maqabane aya kuzama yonke into, anxibelelane ngokugqithisileyo kwaye afunde ngokukhawuleza ngomzimba womnye kunye nendlela yokwanelisa omnye komnye. Nangona kunjalo, ubudlelwane babo busenokungabi namvakalelo kunye nolwalamano olusondeleyo lokwenyani. Oku kunokukhokelela ekubeni bahlukane, amaxesha amaninzi bengazi ukuba bobabini bafuna enye into kwiqabane labo.
Gemini kunye ne-AquariusThembela
Ukuthembana yinto engaqhelekanga kwesi sibini. Kufuneka sigxininise into yokuba baya kuthembana. U-Aquarius ufumana ukuxoka ngokuhlekisa kwaye uGemini uya kuziva ekhululekile ngokwaneleyo ukuba angaxoki. Ngakolunye uhlangothi, u-Aquarius uyayiqonda imfuno yomntu yobumfihlo, kuba oku kuwuphawu apho iNeptune iphakanyisiwe. Bobabini mhlawumbi baya kuba nokuthembana kokugqibela kwiqabane labo kwaye abafane bakhohliswe ngenxa yezizathu zabo zokunika nokufumana inkululeko njengento ephambili ngokupheleleyo. Akukho namnye kubo oya kuba nokwaneliseka ekubaleni ibali okanye ukuxoka xa kukho izinto ezininzi ezinomdla zokuthetha kunye neqabane labo le-weirdo, kwaye kuncinci ukwabelana okuya kugwetywa.
Gemini kunye ne-AquariusUnxibelelwano kunye nengqondo
Xa uGemini kunye no-Aquarius bebandakanyeka kwingxoxo yengqondo, kumnandi ukuba wonke umntu abukele. Bavuselela ingqondo yomnye ukuya kwinqanaba lokuba baqhume iingxabano ababengazi ukuba zikhona kwiingcamango zabo. Ngoxa i-Gemini mhlawumbi iya kuba nomdla yinkqubo yenkolelo ye-Aquarius, isoloko inengqondo kwaye inobuntu, i-Aquarius iya kuba nethuba lokunciphisa ingxaki yabo ye-ego kunye neqabane labo le-Gemini.
Umgangatho oguquguqukayo weGemini uya kubavumela ukuba baziqhelanise nezinye zezo zimo zengqondo kunye nezimvo ezingqongqo zaseAquarian, nokuba abavumelani. I-Gemini inalo uhlobo oluthambileyo oluqondayo ukuhamba konxibelelwano lwentlalo nabanye abantu, kwaye abafane balwele iinkolelo zabo nomntu abaziva besondele kakhulu kuye. Oku kuyinto elungileyo kubomi babo bemihla ngemihla, kodwa ngokubanzi, oku kungazisa ingxaki kuba ubuntu bokwenyani beGemini bunokucinywa de bangaqinisekanga ukuba bangoobani na, kwakhona.
Kubalulekile kubo ukuba babe nokuguquguquka okwaneleyo omnye komnye, nokuba iindawo zabo zinokwahluka kangakanani na. Sekunjalo, kungcono ukuba babelane ngentanda-bulumko esisiseko yobomi efanayo, abadla ngokuyenza, okanye banokude baphelelwe ngumdla omnye komnye. Njengabameli ababini be-Air bafumanisa ukuba unxibelelwano luyisisombululo kuyo nayiphi na ingxaki, kodwa abaqapheli ukuba kude kangakanani ukusuka eMhlabeni ukuze bafumane kunye neengcamango zabo ezingabonakaliyo kunye neenjongo zabo ezingafezekanga ngenxa yokuthetha kakhulu, kunye nesenzo esincinci.
Gemini kunye ne-AquariusIimvakalelo
Sinokuthi uGemini no-Aquarius baqondana ngokugqibeleleyo xa kufikwa kwiimvakalelo zabo. Ngokuqhelekileyo oku kuyinyani, kodwa oko akuthethi ukuba le yile nto bayifunayo bobabini. Ubume obungazinzanga beGemini bunokubenza batshintshe ingqondo yabo okanye imeko yabo yeemvakalelo imihla ngemihla, kwaye ukuba abaziva kakuhle kubudlelwane, baya kuzikhulula ngaphandle kokucinga ngokugqithiseleyo izizathu zokuba kufuneka benze njalo. U-Aquarius uhlala engxamile ukuze azikhulule nakubani na okanye nantoni na, ngoko ke ukuhlukana akuyi kuba yinto engaqhelekanga kwihlabathi labo.
Kwiimeko ezininzi, ingqiqo yabo, indalo yabo yengqondo iya kuncedisana ngendlela enomdla, kodwa akukho mvakalelo ingako yokwakhiwa kumbindi wobudlelwane babo. Kubonakala ngathi omabini la maqabane kufuneka afumane umntu oshushu ngakumbi ukuze azive izinto ngokunzulu kwaye akhanyise iintliziyo zabo ezinomdla. Baza kuba ngabahlobo ngakumbi kunabathandi, nokuba babetsaleleke omnye komnye xa babeqala ukudibana.
Gemini kunye ne-AquariusImilinganiselo
Kwanele ukuthi bobabini bayabuxabisa ubukrelekrele. Enye into nje ezinye iimpawu ezixhalabisayo ngayo. Nangona kunjalo, u-Aquarius unokuba nomdla kakhulu ngeenkolelo zabo zobuntu kwaye uya kuhlala ebaxhasa ngamandla. Le yinto iGemini enokuyiqonda kodwa ayifane ixhase. Ngenxa yokuba iqabane lika-Aquarius lixabisa ukulingana kwabantu njengenkululeko yabo, le nto ingaba yindawo yabo yokwahlukana, nangona iqabane likaGemini lingavumelani ngokwenene.
Gemini kunye ne-AquariusImisebenzi ekwabelwana ngayo
Aquarius luphawu kuphela olukwaziyo ukothusa iGemini. Bahluke kakhulu kunabo bonke abantu kwaye bamele inyathelo ukuba iGemini kufuneka inyuke ukuba bafuna ubomi babo bungakholeleki. Oku akusoloko kunjalo kuba ezinye ze-Aquarius ezingaqhelekanga zinokuba ngumboniso, ziyilwe yimfuno yazo yokulungisa iLanga labo elinesiphithiphithi. Nangona kunjalo, kuyabavuyisa bobabini ukungena kobu budlelwane-u-Aquarius ukothuka kunye noGemini ukubalandela naphi na apho baya khona. Umsebenzi wabo ophambili ekwabelwana ngawo yintshukumo. Babekwazi ukuqhuba amawaka eekhilomitha ukuze bafumane i-ayisikrimu ethile okanye kungekho sizathu kwaphela. Ubukhulu becala banokwenza nantoni na kunye, ukusuka ekuhambeni kunye ne-clubbing, ukufunda iilebhile kunye nemiyalelo yokusetyenziswa kwezixhobo zasekhishini ezahlukeneyo.
I-Gemini idinga iqabane elingabadikayo okanye libenze bazive bethintelekile. Xa ujonga izinto ngolu hlobo, unokuthi akukho nto ingcono kubo kune-Aquarius emangalisayo. U-Aquarius udinga umntu oza kuqonda izimvo zabo ezinkulu kwaye axoxe ngayo nganye kunye nabo, kunye nomntu ongabenzi bazive bethintelekile. Ngubani onokwenza oku ngcono kuneGemini? Nangona kunjalo, banokuzifumana besebudlelwaneni obungenalo uvakalelo olwaneleyo kunye novelwano, kwaye oku ngokuqinisekileyo kuya kuvela ngokukhawuleza nje ukuba kwenzeke into yokuqala ephazamisayo ebomini bomnye wala maqabane. Kufuneka basebenze kwisiseko sabo seemvakalelo kunye nokuqonda kwabo okungathethwayo ukuba bafuna ubudlelwane babo buhlale.
I-Capricorn Ngena Isagittarius I-Scorpio Itaurus